Fivoahan’ny Mpianatrin’ny EASTA-PRO – Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
Izahay mpianatrin’ny EASTA-PRO eto Ambanja dia nivoaka nakany Ankily ny 29 Mars 2014, izay notarihin’ny Ramatoa Talen’ny Sekoly sy ny mpiara-miasa aminy vitsivitsy. Ny tanjona tamin’izany moa dia ny fijerena ny karazamboly izay misy amin’iny faritra iny.
Hita tamin’zany ny fambolena mifangaro , izany hoe karazan-javatra telo na efatra volena miaraka amin’ny tany iray. Ohatra amin’izany ny fampikambanana ny voly Cacao, Akondro, Voasary, Café. Araka ny hitanay tany dia tsapa fa ny fambolena Cacao dia mitady aloka toy ny: bonara, mentalis,…. tamin’ny ankapobeny dia ny fambolena Cacao, Café, Vanille… no tena imasohan’ny olona aty amin’ny faritrin’ny SAMBIRANO. Misy ihany koa anefa ny voly vary fa saingy vitsivitsy satria ny tany efa tsy mety ambolena Cacao no ataon’izy ireo tanimbary.
Ankoatr’izany: nisy ihany koa ny fijerena ny fomba fitazoan’ny mponina manakaiky an’iny sisidranomasina iny ny nofotany mba tsy ho kahon’ny ranomasina amin’ny alalan’ny fambolena honko (hazo haingampitsiry voatokana hitsiry amin’ny sisin-dranomasina izany) ity karazan-kazo ity kou dia tian’ny drakaka hohanina sy anatodizana torak’izany koa ny sasantsasany amin’ny trondro.
Tohin’izany ihany dia niroso hatrany moa izany dianay izany ka lasa nitohy tamin’ny fitsangatsanganana tany amorondranomasina ny Ankifo izany. Ka tamin’io fotoana io ihany koa no nanararaotana nampianatra nilomano izay rehetra mbola tsy nahay nilomano fa ny tena komika sy nahatsikaiky kely tamin’zany dia nisy natahora ranomasina nefa izy natahotra indray no nahay voalohany, ny tena nahafaly dia ny fahaizan’ny rehetra milomano tamin’zany.
Tsara ho marihina fa tamin’izany rehetra izany ny tena ambiance de teo amin’ny moyen de transport satria « tracteur » no nitaterana nohon’ny fahasimbana temporaire teo amin’ny fiara fitateran’ny Ecole, izany hoe le Carlava nay mpianatra eto amin’ny EASTA-PRO izany.
De izay sy izay ny akon’ny dianay tamin’iny faritra iny.
Ny mpanangona sy mpanoratra ny vaovao: RAZAFINDRAJOMA G.J Chrysostôme (Rayah)/Mpianatra/EASTA-PRO/AMBANJA